EDGE Certificate for Gender Equality – AYA Bank
EDGE Certificate for Gender Equality Ayeyarwady Bank is now the first bank in Myanmar that awarded EDGE Certificate for Gender Equality in working environment. The object of attempting to achieve this global recognized certificate is to becomeabetter workplace which is supporting every gender the same in single sectors of office atmosphere. We are proudly sharing this record that winning International Award “EDGE Certificate for Gender Equality” is representing AYA Bank as an environment fostering equal career opportunities for women and men in the workplace. EDGE is the world-leading global assessment methodology and business certification standard for gender equality that incorporates benchmarking, metrics and accountability and recognized the organization and its working environment asaplace having Gender Equality and providing the same opportunities and supportive actions to every women and men from the same working atmosphere. EDGE Certification is currently co-operating together globally with over 200 organizations and 23 different working industries in 50 Countries.
ဧရာဝတီဘဏ်သည် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ကျား၊ မ တန်းတူညီမျှမှုဆိုင်ရာ (Gender Equality) အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် EDGE Certificate ကို ရရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးဘဏ် ဖြစ်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင် အတွင်း ကျား၊ မတန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုကို တည်ဆောက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ အဆိုပါ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို ရယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုလို နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု EDGE Certificate for Gender Equality ကိုရရှိခဲ့ခြင်းသည် ဧရာဝတီဘဏ်ဝန်ထမ်းများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကျား၊ မ တန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိသော လုပ်ငန်းခွင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်း ဖြစ်သည့်အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စွာဖြင့် အသိပေး မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။ EDGE Certification သည် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ အခြေစိုက်အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကျား၊ မတန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိခြင်း အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် တစ်ခုဖြစ်ကာ၊ EDGE Certification လက်မှတ်ရရှိပြီးသော လုပ်ငန်းများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းခွင်များတွင် ကျား၊ မ တန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေးရရှိခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းခွင် အရည်အသွေး ပိုမို မြှင့်တင်နိုင်စေပြီး၊ အဆိုပါ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသော အမျိုးသား အမျိုးသမီး ဝန်ထမ်းများအတွက် တန်းတူ အခွင့်အရေးများစွာရရှိစေသည်ဟု ဆိုပါသည်။ EDGE Certification သည် ယခုအခါ နိ်ုင်ငံပေါင်း ၅၀၊ အဖွဲ့အစည်းပေါင်း ၂၀ဝ ကျော် နှင့် လုပ်ငန်းခွဲနယ်ပယ်ပေါင်း ၂၃ ခုနှင့် ပူးပေါငး်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
← Asia Money 2019 Best Bank for SMEs & Asia Money 2019 Best Bank for CSR
ဧရာဝတီဘဏ်ရုံးတွင်းပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းစေရေးဆောင်ရွက်ခြင်း →